အာတီဒုံ အတွက် အသုပ်ဟင်းတစ်ခွက် – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » အာတီဒုံ အတွက် အသုပ်ဟင်းတစ်ခွက် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
အာတီဒုံ အတွက် အသုပ်ဟင်းတစ်ခွက် – KZ’s ထမင်းဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Feb 24, 2014 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness, How To.., My Dear Diary, Society & Lifestyle | 50 comments
အာတီဒုံ အတွက် အသုပ်ဟင်းတစ်ခွက်
အမှန်တော့ ဒီ တစ်ပတ် ဘယ် စားဖိုမှူးမှ မရှိဘူးဗျ။
အဲတော့ ဒီ တစ်ပတ် အသုပ်ရောင်းမလားလို့ပါ။
ဆလပ်လို့ခေါ်တဲ့ ခပ်ဖွဖွ အသုပ်တွေပေါ့ဗျာ။
ဟုတ်တယ်လေ။ ဗမာသုပ်က နယ်ပြီဆိုရင် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဖတ်ဖတ်သတ်သတ်ဆိုတော့။ ချဉ်ချဉ်ငံငံစပ်စပ် နဲ့ (ပြောရင်းစားချင်လာပြီ)
အမှန်တော့လက်ထဲမှာ Page One ကထုတ်တဲ့ SALAD (RECIPES AT YOUR FINGERTIPS) ဆိုတဲ့စာအုပ်လေး ရှိနေတာ။
အင်ဒီကိတ်တင်း မှာ ၃မျိုး……
၃) အာဟာရပါဝင်မှု တန်ဖိုး စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ကိုယ့် အကြိုက်နဲ့ ညှိနိုင်တာပေါ့လေ။
၃၄ မျိုးထဲကမှ ကိုယ့် ဗမာ ပါးစပ်နဲ့ အရသာတွေ့နိုင်မဲ့ ဆလပ်မျိုးကို ရှာရတာကိုးနော။
အဲတော့ ၇ မျိုးပေါ့။
အဲ။ ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း ဘယ်သူ့ကို သတိရသလဲ ဆိုတော့ အာတီဒုံ။
အာတီဒုံ စားတတ်တာလေးကို ကော်မန့်မှာမြင်ရသလောက် အသီးအရွက်ကို မက်မက်စက်စက်စားပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင်လည်းစားတတ်တယ် ဆိုတော့ကာ အာတီဒုံ ကိုပဲခေါင်းစဉ်တတ်လိုက်တာပါ။
ကျနော် ချစ်သော အာတီဒုံ အတွက် ကျနော့ရဲ့ ပို့(စ) တစ်ပုဒ်ဆိုလည်း မမှားပါဘူးးး။
၁) လွယ်ကူတဲ့ထဲလည်းမပါ၊ မခက်လဲ မခက်ခဲပါဘူးတဲ့
၂) ပြင်ဆင်ချိန်ကလည်း ၃၅ မိနစ်ပါတဲ့။
၃) ပရိုတိန်း ၇ ဂရမ်၊ အဆီ ၃၃ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၁၅ ဂရမ်၊ ပါရှိပါတယ်တဲ့။
ပါဝင်ပစ္စည်း (၄ ယောက်စာ)
– ဂေါ်ဖီထုတ် တဝက်
– အရိုးစိမ်း မုန်ညင်း အနု ၂၅၀ ဂရမ်
– အရိုးဖြူ မုန်ညင်း အနု ၂၅၀ ဂရမ်
– အသုပ်ထဲမှာ ထည့်နေကျဖြစ်တဲ့ အရွက် (Arugula) တစ်စည်း
– ကြက်သွန်ဖြူ ၂ ဥ
– သံပုရာသီး ၂ လုံးစာ သံပုရာရည်
– ရှာလကာရည် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
– သံလွင်ဆီ ၁၂၅ မီလီလီတာ
– ခရမ်းချဉ်သီး ၄ လုံးးး
– ဆားနဲ့ ငရုပ်ကောင်း အနက်
– သံပုရာသီးစိတ်လေးး တစ်စိတ် (အလှဆင်ဖို့)
၂ စင်တီမီတာစီလောက် ဖြတ်/လှီး
ဂေါ်ဖီရယ် မုန်ညင်း ၂ မျိုးရယ်ကို ဆားရည်နဲ့ ၂ မိနစ်လောက်ပြုတ်။
ပြုတ်ပြီးရင် ရေပူကို သွန်ပြီး ရေခဲရေထဲ ထည့်ပြီးမှ ဆေးချလိုက်ပါတဲ့။ (နွမ်းမသွားအောင်ထင်ပါရဲ့)
ဟို ဆလပ် အရွက်ကိုကျ ရေသေချာဆေးပြီး ရေစစ်ထားပါ။
ကြက်တွန်ဖြူကို ဆားလေးနဲ့ထောင်း၊ သံပုရာရည်၊ ရှာလကာရေ၊ ငရုပ်ကောင်းနဲ့သံလွင်ဆီထဲ ထည့်ပြီး ဖျော်ထားပါ။
ပြီးတော့မှ ခုဏက အရွက်စိမ်း (အစိမ်းအကျက်) ကို ဇလုံထဲထည့်၊
ဆော့ကို ဆမ်းပြီးမှ နှံ့အောင် မွှေပါ၊ (တဇိဇိမနယ်ရဘူးနော်)၊ ဖွဖွလေး နှံ့အောင်လုပ်ခိုင်းတာ။
စားမဲ့ ပန်းကန်ထဲ ခရမ်းချဉ်သီးပါးပါးလှီးပြီး ခင်းထားပါ။
ပြီးမှ ခုနက နယ်ထားတဲ့ အသုပ်ကို ပုံလိုက်ပါတဲ့။
ပြီးရင်တော့ သံပုရာသီးစိတ်လေးတင်ပြီး တည်ခင်း ဧည့်ခံနိုင်ပါပြီ။
Cucumber salad (with fresh cilantro)
နံနံပင်နဲ့သုပ်တဲ့ သခွါးသီး အသုပ်ပါ။
၂) ၁၅ မိနစ်
၃) ပရိုတိန်း ၇ ဂရမ်၊ အဆီ ၁၉ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၁၄ ဂရမ်
– သခွါးသီး တစ်လုံး
– ခရမ်းချဉ်သီး ၄ လုံး
– ကြက်သွန်နီမိတ် ၁ စည်း
– သံပုရာသီး ၂ လုံးစာ အရည်
– လိမ္မောရည် ၁ လုံးစာ အရည်
– သံလွင်ဆီ ၄ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
– ကြက်ဥပြုတ် ၂ လုံး
– ဆား နဲ့ ငရုပ်ကောင်း
အသီးအနှံတွေ အားလုံး ရေဆေးပြီး စစ်ထားပါ။
သခွါးသီးကို အခွံခွါ အစေ့ဖယ် သေးသေးတုံး
ခရမ်းချဉ်သီးကို လည်း အလယ်အနှစ်ဖယ် သေးသေးတုံး
ကြက်သွန်မိတ်ကို အဖျားပိုင်းတွေဖယ်ပြီး လှလှဖြတ်
ပြီးတော့ ခုန က ဇလုံထဲ ထည့်ထား
သံပုရာရည်၊ လိမ္မောရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ဆား တို့ကိုတော့ သေချာရောမွှေထားပါ (ဆလပ် ဒရက်ဆင်း အနေနဲ့)
ပြီးရင် ဇလုံထဲက အသီးအရွက်တွေထဲလောင်းထည့်ပြီး သေချာ မွှေပေးပါ။
စားမဲ့ ပန်းကန်ထဲကို ထည့်ပြီး ကြက်ဥပြုတ်လှီးထားလေး ဖြူးလိုက်ရင်တော့ စားရန် အသင့်။
Majorcan-style vegetable salad (with mayonnaise)
Majorcan-style Vege salad
မရောနိ နဲ့ သုပ်တဲ့ အသီးအနှံ အသုပ်ပါတဲ့။
၂) ၃၀ မိနစ်
၃) ပရိုတိန်း ၉ ဂရမ်၊ အဆီ ၇၉ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၂၀ ဂရမ်
– ခါချက်ဥ ၃ လုံး
– ပဲလုံးစေ့ စိမ်းစိမ်း (ကော်ဖီပန်းကန် ၂ လုံး)
– ပဲတောင့်ရှည် ၂၅၀ ဂရမ်
– အာလူ ၂ လုံး
– ကြက်ဥ ၂ လုံးရဲ့ အနှစ်
– သံပုရာသီး တစ်ခြမ်း အရည်
– သံလွင်ဆီ ၃၀၀ မီလီလီတာ
– ဆား၊ ငရုပ်ကောင်း အနက်
ပြီးရင် ပဲလုံးလေးတွေရော ရေဆေးထားးး
ဆားရည်ထဲမှာ သတ်သတ်စီပြုတ်ရပါမယ်။ စိမ်းဆတ်ဆတ် စားလို့ရတဲ့ အနေပဲပြုတ်ရမှာပါတဲ့။
ပြီးရင် စကာထဲ စစ်ထားပါ့မယ်။
အာလူးကိုပြုတ် အခွံခွါ ပြီး ရင် သေးသေးစိတ်။
မရောနိ လုပ်ရမဲ့ အပိုင်းရောက်ပါပြီ။ အပိုင်းကြောင့် ခက်တဲ့ထဲ ထည့်ထားတယ် ထင်ပါရဲ့
ကြက်ဥ အနှစ်ကို သံပုရာရည် နဲ့ ရောပြီး ခလောက်ပါ။
အဲလို ခလောက်နေတုန်း သံလွင်ဆီကို တဖြည်းဖြည်း ထည့်ပေးရမှာပါ။
မွှေရင်း မွှေးရင်နဲ့ မရောနိကစေးကပ်ကပ်ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အပြစ်အကျဲကို အနေတော် ရတဲ့ထိ ရေနွေးနွေးနဲ့ ရောပေးပါ။
ဆားရော ငရုပ်ကောင်းရောထည့်ပြီး ၁၀ မိနစ်လောက် ထားထားပြီးမှ ခုနက အသီးအရွက် ရောရာနဲ့ နယ်ပြီး စားသုံးလို့ရပါပြီ။
Red Cabbage salad (with leek and apple)
ကြက်သွန်ဖြူမိတ် နဲ့ သုပ်တဲ့ ဂေါ်ဖီထုတ်သုပ် (အာတီဒုံကြိုက်တဲ့ ခရမ်းရောင် ဂေါ်ဖီနဲ့သုပ်ပါမယ်။)
၃) ပရိုတိန်း ၆ ဂရမ်၊ အဆီ ၁၉ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၂၂ ဂရမ်
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (၆ ယောက်စာ)
– ဂေါ်ဖီခရမ်းရောင် ၈၀၀ဂရမ် (အသေးတစ်လုံးစာ)
– ကြက်သွန်ဖြူမိတ် ၁ ပင်
– ပန်းသီး ၂ လုံး
– သစ်ကြားသီးဆံ ကော်ဖီပန်းကန်တစ်လုံးစာ
– နံနံပင် တစ်စည်း
– စပျစ်သီးခြောက် ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက် (၅၀ ဂရမ်)
– ရှလကာရေ ၅ ဇွန်း (စားပွဲတင်ဇွန်း)
– မတ်စတာ(ဒ) ၂ ဇွန်း (အဲဒါက ပုလင်းနဲ့ဝယ်လို့ ရလိမ့်မယ်။ Mustard လို့ ရေးထားတယ်)
– ပျားရည် ၃ ဇွန်း
– ဆား ၁ ဇွန်း
– သစ်ကြားသီးဆီ ၅ ဇွန်း
– ငရုပ်ကောင်း အနက်
– ဂေါ်ဖီကို ဆေး၊ အရွက်လိုက်ခွါပြီးမှ သေးသေးရှည်ရှည်လေးတွေ လှီးပါ
– ကြက်သွန်မိတ်ကိုလည်း ရေဆေးပြီး အရှည်လိုက်လေးတွေ လှီးပါ။
– ပန်းသီးကိုလည်း အူတိုင်ဖယ်ပြီးမှ လှီးထားပါ။
– သစ်ကြားသီးဆံကို နည်းနည်းဖယ်ပြီး ကျန်တာ ထောင်းလိုက်ပါ။
– နံနံပင်ရွက် တွေ ရေဆေး စစ်ပြီး စဉ်းထားပါ၊
– ပြီးမှ လှီးထားတာ အကုန် ဇလုံးထဲထည့် စပြစ်သီးခြောက်ပါရောထားပါ။
– အနှစ်အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကို ရောကာ သမ အောင်မွှေပါ။
– အနှစ်ရပြီဆိုရင် ခုနက ဂေါ်ဖီ ဇလုံထဲထည့်ကာ ကောင်းကောင်းနှံ့အောင် ရောပါ။
– ပြီးရင် အပေါ်က ပလပ်စတစ် ရက်ပင်း နဲ့ အုပ်ပြီး ၁ နာရီလောက် ထားလိုက်ပါ။
စားခါနီးမှ ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး အပေါ်က သစ်ကြားသီးစံလေးဖြူးလိုက်ရင် စားဖို့ အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။
White Salad ပါတဲ့
၂) ပြင်ဆင်ချိန် မိနစ် ၄၅
၃) ပရိုတိန်း ၉ ဂရမ်၊ အဆီ ၉ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၆၆ ဂရမ်
ပါဝင်ပစ္စည်း (၆ ယောက်စာ)
– အာလူး (၁ ကေဂျီ)
– နာနတ်သီး ချိုချို အလုံးသေးတစ်လုံး
– နို့စိမ်း ၁ ခွက်
– သစ်သီး ရှာလကာရေ ၂ ဇွန်း
– မရောနိ(စ) ဇွန်း
– ဆားနဲ့ ငရုတ်ကောင်း
– အာလူးကို ဆားရေနဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ပြုတ်၊ ရေအေးစိမ်၊ အခွံခွါ၊ သေးသေးတုံးးးး
– မုံလာထုတ်ကို အလယ်ရိုးဖယ်၊ အပြင်အကာကြမ်းတွေဖယ်ပြီး သေးသေးမျှင်မျှင်လှီး
– နာနတ်သီးကို အအခွံခွါ အူတိုင်ဖယ်၊ အတုံးသေးတုံး
– ၃ ခုကို ဇလုံထဲ ရောထား
– နို့စိမ်းရယ်၊ ရှာလကာရည်ရယ်၊ မရောနိ(စ) ရယ်၊ ဆား၊ ငရုတ်ကောင်းရယ်ကို ရောမွှေ။
– ခုနက အသီးအရွက်ထဲထည့်နယ်
– ရေခဲသေတ္တာထဲ ၁ နာရီလောက် ထား
– စားခါနီး ၁၀ မိနစ်လောက်အလိုမှာ ထုတ်ထားပြီး စားလို့ရပါပြီတဲ့။
Spicy Sweet Patato Salad (with Lemon and fresh cilantro) တဲ့။
၂) ၃၅ မိနစ်
၃) ပရိုတိန်း ၃ ဂရမ်၊ အဆီ ၁၃ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၃၇ ဂရမ်
– ကန်ဇွန်းဥ ၆၀၀ ဂရမ် (၁ ဒသမ ၂၅ ပေါင်)
– ကြက်သွန်နီ ဥကြီး ၁ လုံး
– ဂျင်း ၁ လက်မခန့်
– ဟင်းရွက်ဆီ ၄ ဇွန်း စားပွဲတင်ဇွန်း
– သံပုရာသီးသနပ် ၁ လုံးစာ
– သံပုရာတစ်လုံးစာ အရည်
– ငရုတ်သီး အကျက်မှုန့် ၁ ဇွန်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်း
– စမုံစပါး လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဖျားခန့်
– နံနံပင် ပါးပါးမျှင်မျှင် စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ကန်ဇွန်းဥ တွေကို အခွံခွါ ၂ စင်တီ အရွယ်စီ တုံးး
ကြက်သွန်နီအကို အခွံခွါ ပါးပါးလှီးး
ဒယ်ထဲကို ဆီထည့်၊ ပူလာရင် ကြက်သွန်နီထည့် ဆီသတ်
ဂျင်းရယ်၊ ဆားရယ်ကို ထည့်၊ ပြီးရင် ကန်ဇွန်းဥထည့်။
နှံ့အောင်မွှေပြီး ရေတစ်ခွက်ထည့် (၂၅၀ မီလီလီတာ) ပြီး ၈မိနစ်ကနေ ၁၀ မိနစ်လောက် မီးမျှင်းမျှင်း နဲ့ တည်ထားပါ (ဒါမှမဟုတ်) ကန်ဇွန်းဥ နူးပြီး မကျေသွားခင်ထိ တည်ပါ။
တည်ထားချိန်မှာ သံပုရာသီးသနပ် ကို သေးသေးလေးတွေ တုံးပြီး အိုးထဲထည့်။ နောက်ကနေ သံပုရာရည်၊ ငရုတ်သီး အကျက်မှုန့်၊ စမုံစပါး တို့ကို ထည့်ပြီး နှံအောင်မွှေပြီး အနှစ်လေး ရလာရင် မီးပိတ်ပါ။
ပန်းကန်ထဲကို ထည့်ပြီး လုံးဝ အအေးခံပြီးမှ နံနံပင်လေးနဲ့ ထည့်စားပါ။
Kale and tuna Salad (inalime dressing) တဲ့။
၃) ပရိုတိန်း ၁၀ ဂရမ်၊ အဆီ ၃၃ ဂရမ်၊ ကာဘွန်ဟိုက်ဒရိတ် ၃ ဂရမ်
– ၅၀၀ ဂရမ်ရှိတဲ့ အနားတွန့် ဆလပ်ရွက် (ဟိ၊ မှန်လားတော့မသိ)
– ၂၅၀ ဂရမ်ရှိတဲ့ တူနာ ငါးသေတ္တာ
– သံပုရာ လေးလုံး အရည်
– သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
– ကြက်သွန်နီ အဖြူရောင်
ဆလပ်ရွက်ကို အရင့်တွေဖယ် အလယ်ရိုးဖယ်ပြီး အရွက်သားကို မျှင်မျှင်လှီးး
ဆားရည်ထဲ ထည့်ပြီး ၃ မိနစ်လောက်တည်။ ရေစစ်ပြီး ရေခဲရည်ထဲ ထည့်ပြီးမှ ရေပြန်စစ်ထား
ငါးသေတ္တာထဲက တူနာငါးအသားကို ဖယ်၊
ကျန်တဲ့ ဆီ အနှစ်ကို သံပုရာရည်၊ သံလွင်ဆီ၊ ဆား၊ငရုတ်ကောင်း ထည့်ပြီး မွှေ
ပြီးရင် အရွက်နဲ့ အဲဒီ အနှစ်ကို သမအောင်မွှေ၊
ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပြီးအပေါ်က တူနာ ငါး အသားနဲ့ ကြက်သွန်ကွင်းကို တင်ကာ စားနိုင်ပါပြီ။
ဒီပို့(စ) အောင်မြင်မှ တင်တော့မယ်။
၃၄ မျိုးထဲကမှ လွယ်မယ်ထင်တာ။ ကျနော် ကြိုက်နိုင်မယ်ထင်တာ ရွေးလိုက်တာပဲဗျ။
အဲ အပြင်မှာ စားဖူးတာလေးလည်း ဦးစားပေးရွေးထားတယ်။
ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ ဘယ်လို အရသာမျိုးကြီး ရမှာပါလိမ့် လို့တော့ တွေးမိလိမ့်မယ်။
ဒီပို့(စ) ကို စိတ်တိုင်းမကျဖူးဆိုရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။
နေ့တိုင်း သွေးညှီနံ့စို့စို့နဲ့ အသားကင် မကျက်တကျက်ရယ်…
အဲသည့် Salad မျိုးစုံရယ်နဲ့ နှစ်ပါးသွားခဲ့ရဖူးတဲ့ ဘဝဟောင်းကို သတိရမိတယ်…
ကျန်းမာရေးအတွက် အရွက်စိမ်း Salad က အလွန်ကောင်း… ဆိုပဲ
သူတို့ အသုပ်က မျိုးစုံပဲ ကျောက်(စ) ရေ။
အမျိုး ၁၀၀ ကျော်တယ်။
ဝယ်မကျွေးရင် အနားတောင် မသီချင်ဘူးးး
အသားကင်နဲ့ မတွဲရင် ဘာမှ အရသာမရှိသလို
ကျိပီး ရှောက်သီးသုပ်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုတ်တို့လောက်တော့ သရေကျမလာ..
ဒါပေမဲ့အာ့ဒွေက လူကြီးတွေ အများကြီးစားလို့မကောင်းဘူးလားလို့ ချွိရဲ့ ရုံးကလူကြီးတစ်ယောက် ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ် ၀ိတ်ကျတယ်ဆိုပီး မနက်တိုင်း Salad အစားကောင်းလိုက်တာ ဗိုက်ပွ အစာအိမ် ကဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲ ဘန်ကောက်တောင် ဆေးခန်းသွားပြရတယ်….
နာ ဆို အသားကင်လေးနဲ့ တွဲစားရတယ်။
နာ တို့ ချဉ်ငံစပ်၊ ဆီရွှဲရွှဲ က ပိုစားကောင်းတယ်။
မနူးမနပ်တဲ့အသားဆို သူ့အနှစ် တောင်မျိုမရတော့ဘူး။
အားပေးသူ မရှိဘူးလို့ တွက်ထားတာ။
ဝမ်းသာတာ။ အာ့ဆို နောက် သစ်သီးသုပ်ကို ခန့်ခန့် အတွက် ခေါင်းစဉ်တတ်ရေးပေးမယ်။
” ပြုတ်ပြီးရင် ရေပူကို သွန်ပြီး ရေခဲရေထဲ ထည့်ပြီးမှ ဆေးချလိုက်ပါတဲ့။
ပညာ ကို မှတ်သားသွားပါတယ် ။
ကျနော်လည်း ဒီဟာကို ဘာသာပြန်မှ ဒါကို သိတယ်။
မုန့်ဖတ်ကို အဲလို ပြုတ်တာသိတယ်။
ထွေးမသွားအောင်လို့ ရေပူဖယ်ပြီး ရေအေးလောင်းတာ။
ဘာအရသာ ရှိမယ် မပြောတတ်ဘူး
ဒီတစ်ခါ ဘယ်သူများ လက်တွေ့စမ်းသပ်ဖို့ အကူအညီပေးမလဲဗျို…
သူတို့ဟာသူတို့ ဆိုရင်တော့ ကောင်းသလိုပဲ။
ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အသုပ်စားပြီးရင်တော့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လိုပဲ။
အသီးအရွက်သုပ်တွေတော့ အကုန်ကြိုက်တယ်ဗျ…ဒါပေမဲ့ ဗမာ့နည်းဗမာ့ဟန်သုပ်ပဲ စားဖူးတယ်..
စားလေ့ရှိတာတော့ ပဲသီးသုပ်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီးသုပ်….
အန်တီချွိ အသုပ်တွေအရသာဘယ်လိုနေမယ်သာမသိတာ…ပုံတွေကတော့ စားချင်စရာပဲ…
ဗမာသုပ်တွေက သိတဲ့သူတွေ များမှာမို့ ဒီ လို ဘာ အရသာမှန်းမသိတာတွေ ရှယ်တာပါ။
ဗမာအသုတ်နည်းမှာက ငံပြာရည်၊ ငါးပိ၊ အချိုမှုန့်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် စတဲ့ အရသာတွေနဲ့ အထူးပြုထားတာမို့လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ လုံးဝ မညီညွတ်ဘူး .. အခုလို ဆလပ်မျိုးတွေမှသာ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အရသာကို ခံစားလို့ရမှာမို့လို့ စားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် ..
ဒီလို ဆလပ်တွေကို ပေါင်မုန့်ကြမ်းတွေနဲ့ ညှပ်ပြီး စားလေ့ရှိကြတယ် …
ဆွိကို အကြွေးတင်နေပြီ … တနင်္လာနေ့ရောက်တိုင်း မျက်နှာပူတယ် …
အခုတလော ကျန်းမာရေးအစားအစာတွေကိုပဲ အာရုံစိုက်နေမိတော့ ဟင်းစီစဉ်ရတာ ခက်နေတယ် … ကိုယ်တိုင်ချက်ထားပြီး ကိုယ့်လက်ရာကိုယ်တောင် စားမ၀င်လောက်အောင် ချက်နည်းပြောင်းထားလို့ .. ;)
ဘာမှ မျက်နှာမပူနဲ့ ဝေရေ။
ဒါနဲ့ ပဲ ဖွက်ထားတာလေးတွေ ထုတ်သုံးနေတာ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီရင်လည်း တင်လို့ ကောင်းပါတယ် ဝေရေ။
ဥပမာ တစ်ခုပေါ့နော် ..
ကန်စွန်းရွက်ကြော်ရင် ဆီနဲ့ မီးက အဓိကပဲ … ကန်စွန်းရွက်ကို ဆီများများ မီးပြင်းပြင်း ကြက်သွန်ဖြူဆီသတ်ပြီး ဟင်းချိုမှုန့်ပါ ထည့်ကြော်တော့ တရုတ်ဆိုင်ကအတိုင်း စားလို့ အရမ်းကောင်းခဲ့တယ် ..
အခု ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး ဆီကို ပါလေရာထည့်ပြီး အချိုမှုန့်လုံးဝမသုံးတော့ အရသာက ကန်စွန်းရွက်ပြုတ်သာသာပဲ …
လည်ပင်းမှာ ဆီနဲ့ပတ်သက်ပြီး အလက်ဂျစ်ဖြစ်တတ်နေလို့ ဆီရှောင်ရင်းနဲ့ ဟော့ပေါ့၊ ကြေးအိုး၊ ဆန်ပြုတ် လို စတိုင်တွေနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတယ် …
အဲလာ ကောင်းတယ် ဝေ။
ကိုယ်တိုင်လည်း အလေးချိန်လျှော့ချရေးးး တစ်ပတ်စာလောက် ဒိုင်းယက် ပလန်လေး ဆွဲမို့ဟာကို……………..
ဒီ ဦးနှောက်က စားချင်တာတွေကျ ရှောရှောရှူရှူထွက်ပြီး
good good ။
ဒီတခေါက် ရုံးမှာ မီနူးဆွဲဖို့ အလှည့်ကျလာရင် မပူရတော့ဘူး။
( desktop site ပြောင်းရင်ပျောက်တတ်လို့ ဒီလိုပဲမန့်လိုက်အိ)
နောက် တစ်ပတ် သို့ ဘယ်သော အခါ ပေါ့။
ပြေးလိုက် လွှားလိုက်နဲ့ ထမင်းဆိုင် ခုမှရောက်သတော့။ ဒီအသုတ်တွေကိုတော့ စားတော့ကြည့်ဖူးချင်တယ်။ အရသာကိုသိပ်တော့ကြိုက်လှမယ်မထင်ဘူး။ မြန်မာအသုတ်တွေလဲသိပ်မကြိုက်ဖူး။ ဒါပေမဲ့ သားတော်မောင် ကတော့ ဘယ်အသုတ်ဖြစ်ဖြစ်တအားစားသမို့ ကူးထားလိုက်တယ် ချွိချွိရေ။ အရွက်အမျုိးမျိုးကို ကိုရီးယားတွေသုတ်သလို ဗနီကာလေး နှမ်းဆီလေး နှမ်းကလေးနဲ့သုတ်တာမျိုးတော့ ခဏခဏစားဖြစ်တယ်။ အရွက်တွေကို ရေနွေးဖျောရင် ဆားကလေးထည့်ဖျော၊ လုံးဝအရောင်မပျောက်ဖူးရယ်။ ဟင်းနုနယ်တောင် မဲမသွားပဲ စိမ်းစိမ်းကလေး။ သစ်သီးသုတ်လဲစောင့်မျှော်နေဘာတယ်။ ၀ိတ်ချမို့
မက်မှန်လေး က အသုပ်ကြိုက်မှန်းးးး
သစ်သီးသုပ် မျှော်တဲ့သူတွေ များတယ်ဆိုတော့ ဒီ တစ်ပတ် စာရေးရတော့မှာပေါ့နော်။
အဲဒီ ဆလပ်တွေကို ဒီရောက်မှ ကြိုက်သွားတာ…
ဆရာမကေရဲ့ဆလပ်ကိုလဲ လုပ်စားဦးမယ်..
ထနောင်းရွက်သုပ် ကုက္ကိုရွက်သုပ် ရှားသီးဆံသုပ် ညောင်ရွက်သုပ်( ညောင်ရေဖူးသုပ်)ကို ပိုလွမ်းတယ်..။
အာ့ဆို အညာ အသုပ်နဲ့ ဟင်းစပ် စပ်ပေးပါ။
အဲဒီလို အရွက် အသီးအသုပ်တွေ မြင်ရင် မနေနိုင်ဘူး
စားချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား တ မေမေ
ဂလို စုံစီနဖာ စားဖွယ်ရာ ဆိုင်လေး ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ယင်
ကျော့်ကို ရှယ်ယာ ထည့်ဝင်ခွင့်ပုဖို့
ခုတည်းက ကြိုပီး ချိတ်ထားဘာရစေ ခညာ …
အာတီဒုံ အတွက် အသုပ်တွေကို
ကျော် တစ်ယောက်တည်း သမ သွားပါတယ် …
အာတီဒုံ အတွက် ကျန်တော့ဘူး …
ဒါမဲ့ ကိုယ်တိုင် မချက်ဖူးနော်။
ချွိချွိ သစ်သီးသုတ်နဲ့အတူ သစ်သီးဖျော်ရည်လေးပါထဲ့ပေးပါ… တစ်ခါ အင်တာနက်မှာဖတ်လိုက်ရတယ် ကျမ်းမာရေးသစ်သီးဖျော်ရည်တဲ့ ပူစီနံရယ် သံပုရာရယ် နောက်ပီး ထောပတ်သီးလား စတော်ဘယ်ရီလား မမှတ်မိတော့ဘူး
နာ့ အသံထွက်ပြောတာကို လိုက်ရေးနိုင်မဲ့ ပလိုဂလန် လေးဘာလေး ရရင် ကောင်းမယ်။
အသီးရွက် ဆိုရင်တော့ ဗမာသုပ်သုပ် ဘိုသုပ်သုပ် ကုန်ကြိုက်…
ပုဇွန် သီးစုံ ဆလပ်…
မရိုးနိစ်၊ သံလွင်ဆီနဲနဲနဲ့နယ် နို့စိမ်းဆမ်း၊ ငရုတ်ကောင်းလေးဖြူး
ပူဒီနာလေးတစ်ခက် နဲ့ အလှဆင်ပါ..
ဒါလေးကို သစ်သီးသုပ်ထဲ ထည့်ပါရစေ။
ဖုန်းထဲမှာ offline save လုပ်ထားတယ်… အသီးအရွက်ကြိုက်တတ်တဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် … ဟီး…
အနော်လည်း သမရိုးကျ အရွက်ကြော်စားနေရတာ ပျင်းနေပြီ.. ဂလိုလေး လုပ်စားဦးမယ်..
တခါက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စားဖူးတာ Summer salad ဖြစ်မယ်။
စားကောင်းတယ်ဆိုပြီး လုပ်စားကြည့်ချင်နေတာ အတော်ပဲ။
အာတီဒုံ ကိုလည်း လက်တို့ပေးပါဦး ချစ်မရေ။
တကူးတက အာတီဒုံတွက်ဆိုပြီး စပယ်ရှယ် ဆလဒ် လုပ်ပေးကာမှ ကျောင်းပြေးနေတာနဲ့ တိုးသွားတယ်။
ရှဲ့ ရှဲ့ သိုင်းကျူးအာဘွားပါ။
အရွက်တွေ ကြိုက်တာမှန်ပေမယ့် အာတီဒုံက ထင်သလောက်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် မစားတတ်သေးပါဘူး။အသားတွေ မကြိုက်တာသာရှိတာ။
ဒါနတွေ မစင်ကြယ်ခဲ့လို့ အကောင်းတွေစားမရတာဖြစ်မှာပဲ။
လက်ဖက်ကို ဂေါ်ဖီတို့ ခရမ်းချဉ်သီးတို့နဲ့ သုတ်တဲ့tea salad တို့ ကြိုက်တာ။
တခါတလေ အိမ်မှာ အသားဟင်းတွေချည်းဆို မုန်လာဥနီလေးပါပါးလှီး၊ဂေါ်ဖီလေး လက်တလုံးလောက်လှီး၊ခရမ်းချဉ်သီး အကွင်းအကွင်းလှီး(အိမ်မှာအမြဲရှိတာ ဒါပဲကိုး)သံပုရာသီးလေးညှစ် သကြားလေး နည်းနည်းထည့် ဇလုံ ၂လုံး ဟပ်ပြီး ဂေါက်ဂေါက်ဂေါက်လို့ ခေါက်စားပလိုက်တာ။
မယ်ဆွိလေးရဲ့ salad တွေလည်း လုပ်စားကြည့်အုံးမယ်။
ခါကြက်ဥဆိုတာ မုန်လာဥနီပဲမလား။Mustard ဆိုတာ မုန်ညင်းလို့သိထားတယ်။City Mart မှာရမယ်ထင်တယ်။Arugula ဆိုတာတော့ ရှာမတွေ့ဘူး။အားလုံး စားချင်စရာလေးတွေ။ကျေးဇူးပါ။
မယ်ဆွိကို ကတိပေးထားတဲ့ ရွှေခယ်သူရဲ့ ပုဇွန်ဟင်းစပ်တွေက ဓာတ်ပုံတွေ စုဆောင်းထားပြီးသား၊အစားအသောက်ကို စိတ်သွင်းလို့မရဖြစ်နေသေးလို့။စောင့်ပါအုံးနော်။
Malaysian pineapple salad တော့ Trader’s မှာစားဖူးတယ်။နာနတ်သီးအတုံးလေးတွေကို မုန်လာဥနီ အမျှင်အမျှင်လေးတွေနဲ့ ငရုပ်သီးမှုန့် မဆလာ သကြား သံပုရာရည်တွေနဲ့ ရောသုပ်ထားတာ စားလို့ကောင်းမှကောင်း။နောက်ပြီး သစ်တော်သီးပေါ်ချိန် နောင်နောင်သည်တွေရောင်းတဲ့ သစ်တော်သီးရေခဲစိမ်ပြီး မဆလာငရုပ်သီးမှုန့်သကြားတွေနဲ့ ခလောက် သံပုရာရည်လေးညှစ်ဆိုတာလည်း စားကောင်းတာပဲ။
အာတီဒုံ ပြောမှ မြန်မာ အသုပ်လေးတွေကို စပယ်ရှယ်ဖော်ပြမလားလို့ စဉ်းစားလိုက်မိပြီ။
နောက်တစ်ပတ်တော့ သစ်သီးသုပ်ကို သူတို့ နည်းနဲ့ တင်လိုက်ဦးမယ်။
စားဖိုမှူး၂ယောက်ရဲ့ လက်ရာကို မြည်းစမ်းနေရတဲ့ပုံပေါ့နော်။ငါကွ…
မ ချွိ ရွာ ထဲ မှာ ယောကျာ်း စား ဖိုး မှူး တွေ ကို သင် တန်း ပေး ပါ အုံး
စာရင်းးးလေးးး ပေးး ကြပါ
မရိုးနိစ်ကတော့ အိမ်မှာမပြတ်ဝယ်ထားပြီး ၀ိတ်လျော့ချင်တယ်ဆိုရင် ဆလပ်လုပ်စားဖြစ်တယ်… ပိန်လောက်တယ်.. အဲဒီဘိုသုတ်တွေကိုလည်းအရမ်းကြိုက်တယ်.. :))
အဲဒါ တစ်ဘူး သောင်ဇင်အိုင်လန်း တစ်ဘူးနဲ့ အလုပ်ဖြစ်နေတာ။
ငမန်းအရေခွံသုပ် အဲ့လို အသုပ်မျိုးတွေ ပိုကြိုက်တယ်။ အခုဒီအသုပ်တွေကတော့ စားဖူးသလိုလိုတော့ ရှိသလားပဲ သေချာမှတ်မိတော့ဘူး။
အကြိုက်ဆုံးကတော့ ချိုင်းမွှေးသုပ် ဟိဟိ
အဲဒီ ကြိုက်တဲ့ အသုပ်တွေ သုပ်နည်း သေချာပေးပါလားကွယ်
ကိုယ်တိုင် လုပ်စားဖို့ ပေးတာလေ။
တလောကလုံးစားလို့ရအောင်.. သတင်းစာရဲ့ ဒီလဟင်းစပ်အဖြစ်”မ”သွားပါကြောင်း…
အများအားဖြင့်အဲလိုလုပ်တာဟာ.. အရွက်မှာပါတဲ့အရောင်နွမ်းကျသွားနဲ့အတူတူ.. လိုက်မပြောင်းသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်..။
ထမင်းကြော် ပို့(စ) ရော ယူပြီးပြီလားးး
ခုတလော အလုပ်များလို့ ထမင်းဆိုင် မဖွင့်နိုင်လို့ စိတ်မကောင်းနေတာ။